Fikaonandoha teny Ivato – Voafaritra ny mari-karama vaovao naroson’ny mpiasam-panjakana - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Fikaonandoha teny Ivato – Voafaritra ny mari-karama vaovao naroson’ny mpiasam-panjakana
Nahitana solontena avy isaky ny Faritra 22 ireo mpiasam-panjakana nikaondoha teny Ivato
Miandrandra maraim-baovao. « Nofaritana ho 800 ny mari-karama na « indice » farany ambany ho an’ny mpiasam-panjakana ary 9 000 ny farany ambony, raha 300 sy 4 000 izany ankehitriny ». Santionany tamin’ireo tsoa-kevitra lehibe, tapaka nandritra ny fikaonan-doham-pirenen’ny mpiasam- panjakana teny amin’ny Ivon-toeram-pivoriana iraisam-pirenena eny Ivato, notontosaina nanomboka ny zoma ary nifarana ny sabotsy teo io. Raha araka ny vinavinan-kajy tsotra dia mihoatra ny Ar 200 000 ny karama farany ambany haroson’ izy ireo. Noresahina ihany koa ny tokony hanamboarana ny tambin- karama isan-karazany. Ireo rehetra ireo izay nangatahana haiditra ao anatin’ny lalàna momba ny fandaniam-bolam-panjakana ho an’ny taona 2013.
« Mila miasa tsara sy manome fahafaham-po ny mpanjifa ihany koa anefa ny mpiasam-panjakana ary tokony hatao mazava ny fitantanan- draharaham-panjakana », hoy Rakotondrainibe Simon Richard, mpandrindra nasionalin’ity fikaonandoha ity. Tafiditra ao anatin’ilay sehatra fanatsarana sy ny fanadiovana ny raharaham-panjakana io. Anisan’ ireo tsoa-kevitra ny tokony hananganana filankevitra ambonin’ny raharaham-panjakana hisahana izany ary angatahan’ireto mpiasam-panjakana ireto hajoro isaky ny minisitera. Mila diovina sy atao tsara tantana ny harem-pirenena sy ny tetibolam-panjakana izay heverin’ izy ireo ho lalana ahazoana manatratra izay fanondrotana karama izay, hamerenana ny hasin’ny mpiasam-panjakana. Natsangana nandritra io fikaonandoha io ihany koa ny kaonfederasiona nasionalin’ny sendikan’ ny mpiasam-panjakana, rafitra hanara-maso ny fampiharana ireo tsoa-kevitra ireo. Nilaza ny minisitry ny Fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika, Razafindehibe Etienne Hilaire, nisolo tena ny fitondram-panjakana fa hampitaina eny anivon’ ny mpitondra fanjakana ny fehin-kevitra rehetra notinapaka. Tsy vitsy tamin’ireo mpiasam-panjakana no nilaza ny fisalasalany ny amin’ny mety ho fahatanterahana ireo rehetra ireo.
Ivato, Mpanoratra Rijakely, 10.09.2012, 09:26	FIARAHAMONINA